होइन के हुदैछ नेपालमा? कन्चनपुरमा निर्मला भन्ने कोहि थिएन! उनको हत्या र बलात्कार भएकै छैन ! हेर्नुहोस् भिडियो – PathivaraOnline
Home > समाचार > होइन के हुदैछ नेपालमा? कन्चनपुरमा निर्मला भन्ने कोहि थिएन! उनको हत्या र बलात्कार भएकै छैन ! हेर्नुहोस् भिडियो
२ हजारका लागि आफ्नै बुबाको घाँ’टी थि’चेर ह’त्या गरेपछि… (भिडियो हेर्नुस)
अमेरिकाबाट फर्काइएका ५ नेपालीको हात, खुट्टा र घाँटी बाँध्नुको कारण यस्तो रहेछ